Raad Raac News Online – Inter Milan oo la ogaaday inay isku dayday saxiixa Edin Dzeko
Inter Milan oo la ogaaday inay isku dayday saxiixa Edin Dzeko
FIVE STAR October 29, 2016 Comments Off on Inter Milan oo la ogaaday inay isku dayday saxiixa Edin Dzeko
Milan-(Raad Raac Sports)-Wakiilka weerar yahanka kooxda Roma ee Edin Dzeko ayaa xaqiijiyay in kooxda Inter Milan ay isku dayday saxiixiisa suuqii xaggaaga markaas oo shaki lagaliyay booskiisa joogtada ah ee kooxda Roma.
Edin Dzeko ayaa la dhibtooday xiliciyaareedkii hore goolal yari soo wajahday laakiin xiliciyaareed kaan wuxuu hogaanka u haayaa gool dhalinta horyaalka isaga oo leh 10 gool.
Wakiilka Edin Dzeko oo shalay oo jimco ahayd la hadlay saxaafada ayaa yiri:
“Inter waxay isku dayday saxiixa Edin Dzeko suuqii xaggaaga, si ay ugu buuxiyaan booska Icardi oo la filayay inuu katago, laakiin xaalada dhaqaale ee xiligaas ay ku jirtay kooxdu uma fududayn inay bixiyaan lacagta laga doonayay si ay u dhamaystiraan saxiixiisa”.
“Sida aan ogaaday Roma waxaa loo soo gudbiyay dalabyo badan oo ka yimid qaar kamid ah kooxaha ingiriiska, waxaa kaloo jiray dalab 30 milyan oo euro ah oo ka yimid koox shiinays ah” ayuu sii raaciyay.
“Laakiin Masuuliyiinta Roma waxay ahaayeen kuwo arinkoodu uu cad yahay, waxay sheegeen inaysan iska fasixi doonin Edin Dzeko ilaa uu laacibku isaga iskiis u dalbado in la fasaxo”.
“Wuxuu doortay inuu iska sii joogo si uu dhamaan u tuso inuu yahay weerar yahan wanaagsan, haatan wuxuu dhaliyay goolal badan, waxaan rumaysanahay in haddii uu ku sii socdo sidaan ay Roma ku guulaysan doonto horyaalka”.
Raad Raac Sports